घरमा बेला-बेलामा माउसुली देखिए ? हुनसक्छ यस्तो कुराको संकेत – Jagaran Nepal
काठमाडौँ । कहिलेकाहीँ पशुपक्षी र जीवजन्तुले भविष्यमा हुनसक्ने विभिन्न किसिमका घटनाका बारेमा अवगत गराइदिन्छन्। घरमा पाइने माउसुलीले भविष्यमा हुने धेरै घटना बताइदिन्छन् । यो वर्णन शकुन शास्त्रमा गरेको पाइन्छ ।
जानौं माउसुलीसँग जोडिएका शकुन तथा अपशकुनः नयाँ घरमा प्रवेश गर्ने समयमा गृहस्वामीले मरेको वा माटो लागेको माउसुली देखेमा उक्त घरमा बस्ने मानिस रोगी हुन सक्छन् । यस अपशकुनबाट बच्नका लागि पूर्ण विधिविधानका साथ पूजन गर्नुपर्छ।
माउसुलीले कामक्रीडा गरेको देख्नुभयो भने कुनै पुरानो मित्रसँग भेट हुनसक्छ। दुई माउसुली झगडा गरेको देख्नुभयो भने तपाईंको कसैसँग वैमनस्य हुन सक्छ । दिउँसो खाना खाँदा माउसुलीको आवाज सुन्नुभयो भने छिट्टै कुनै शुभ समाचार सुन्न पाउनुहुनेछ । तर यो दुर्लभ नै हुन्छ किनकि माउसुलीहरू प्रायः रातमा मात्र आवाज निकाल्छन्।
शरीरको कुन अंगमा खस्दा के फल ? टाउको: सम्पत्ति पाइने सम्भावना कपाल: मृत्युको बेला भएको संकेत दाहिने कान: गरगहना प्राप्ति देब्रे कान: आयु वृद्धि नाक: भाग्योदय मुख: मीठो भोजन दाहिने गाला: उमेर बढ्ने देब्रे गाला: पुरानो साथी भेट गर्दन: यशप्राप्ति
दाह्री: डरलाग्दो घटना जुँगा: सम्मान प्राप्ति आँखीभौं: धनहानि दाहिने आँखा: कुनै मित्रसँग भेट देब्रे आँखा: छिट्टै धनहानि घाँटी: शत्रुनाश दाहिने काँध: विजय प्राप्ति देब्रे काँध: नयाँ शत्रु बन्ने दाहिने हात: धनलाभ देब्रे हात: सम्पत्ति नाश दाहिने हत्केला: कपडा पाइन्छ देब्रे हत्केला: धन नाश
दाहिने छाती: धेरै खुशी देब्रे छाती: घरमा क्लेश कमरको बीचमा: आर्थिक लाभ पिठ्युँको दाहिने भाग: सुख पिठ्युँको देब्रे भाग: रोग पिठ्युँको बीच भाग: घरमा कलह नाभि: मनोकामना पूर्ण दाहिने जाँघ: सुख देब्रे जाँघः शारीरिक पीडा दाहिने घुँडोः यात्रा देब्रे घुँडोः बुद्धिनाश दाहिने गोडोः ऐश्वर्य प्राप्ति देब्रे गोडोः बिरामी दाहिने पाइतालोः श्री प्राप्ति देब्रे पाइतालोः व्यापार हानि